Afrika, 03 September 2019
Talaado 3 September 2019
IGAD oo ka shiraysa abaarta gobolka
Magaalada Nairobi waxaa maanta ka furmay shir ay yeelanayaan waddamada urur goboleedka IGAD, kaasoo ay uga hadlayaan arrimaha la dagaalanka abaaraha iyo nafaqa-darrada ka jirta wadamadaas.
Qeybta Afrika ee VOA oo Shaqaaleheeda u qabatay Xaflad Sannadle ah
Beerta loo nasashada iyo ciyaaraha tago oo ku taalo Magaalada Arlington ee gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington, waxaa lagu qabtey Shaley galab Xaflad Maalin joog ah oo Qeybta Africa la hadasho VOA ay shaqaalaheeda, Madaxda iyo qoysaskooda ay kasoo wada qeybgalen.
Cumar Al Bashir oo dacwado lagu soo oogay
Garsoore maxkamadeed ayaa maanta si rasmi ah labada dacwadood oo midi tahay heysasho lacago qalaad oo sharci darro ah iyo musuq maasuq kusoo oogay madaxweynihi hore ee dalka Sudan Omar al-Bashir.
Haween iyo carruur badan oo lagu afduubtay Nigeria
Koox hubeysan ayaa tobaneeyo haween iyo carruur ah ku afduubtay weerar ay ku qaadeen xaafad ku taalla waqooyiga galbeed ee Nigeria, sida ay sheegeen saraakiil iyo dadka deegaanka.
Libya: Muhaajiriin ay Soomaali ku jiraan oo la' la'yahay
Ilaa 40 qof oo muhaajiriin ah ayaa la la’yahay in kastoo laga cabsi qabo inay dhinteen kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay badda Medhitareeniyaanka habeenkii Talaada ee 27-ka Augast.
NISA oo qabatay nin ka tirsan Al-Shabab
Kadib dilkii shalay loo gaystay Maxamed Amiin Sheekh oo horey ugu shaqayn jiray maamulka Gobolka Banaadir ayaa hay'adda nabadsugidda qaranka waxay sheegtay inay qabatay nin lala xiriiranayo dilkaas
Kenya oo markii ugu horreysay dhoofisay saliid
Dawladda Kenya ayaa maanta si tijaabo ah u billowday dhoofinta saliidda cayriin oo laga dhoofiyey dekedda magaalada Mombasa.
Dawladda oo diidday aqoonsiga natiijada doorashooyinka Jubaland
Xaaladda maamul goboleedka Jubaland iyo gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kismaayo ayaa maanta deggan siyaasad ahaan maalin kadib markii halkaasi ay ka dhaceen doorashooyin iska soo horjeeda.
ONLF oo ka shiray xaaladda siyaasadda Itoobiya
Kenya oo loo doortay musharaxa Afrika ee Golaha Ammaanka
Dawladda Kenya ayaa ku guulaysatay codbixintii Guddiga Joogtada ah ee Ururka Midowga Afrika ee loogu tartamayey cidda qabanaysa kursiga Afrika ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay sannadaha 2021-ka illaa 2022-ka.
Reer Khartuum Lama Dhicin Maxkamadeynta Al-Bashiir
Qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Khartoum ayaan la dhicin maxkamadeynta Al-Bashiir iyagoo ku tilmaamay mid aan ku fileyn oo soo daahday.